Free Plan Nkọwa
Mgbe ịpịrị bọtịnụ "Mee ọ rụọ ọrụ", a ga-ebute gị gaa na peeji nke ịchọrọ ịdenye aha na ọwa 20 ọzọ na dịka vidiyo 20. Mgbe ịpịrị bọtịnụ "Mee ọ rụọ ọrụ", soro ntuziaka ndị edere na ibe iji mee nke ọma ịdenye aha na ntanetị na vidiyo.
Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla na-achọ ịmasị na / ma ọ bụ denye aha na ọwa, pịa bọtịnụ "Skip" iji gosipụta ọwa ọhụrụ. Mgbe itinyere aha ọwa 20 na vidiyo iri abụọ gara nke ọma, atụmatụ Starter ga-arụ ọrụ, ị ga-enwetakwa ndị debanyere aha iri azụ n'ime oge awa iri na abụọ.
Kedu ka m ga-esi kagbuo atụmatụ m n'efu?
Enterprise, J.Randall & Amara Atụmatụ FAQ
Enterprise, Elite & Celebrity Plan Details (idgwọ Atụmatụ)
Atụmatụ Enterprise, Elite na Celebrity na-ewu ewu maka ọtụtụ ebumnuche.
Mgbe ị debanyere aha na otu n'ime atụmatụ ndị a, ị na-enweta ndị debanyere aha 10-15 (Enterprise) na-akpaghị aka, 20-30 ndị debanyere aha (Elite), ma ọ bụ ndị debanyere aha 40-60 (Celebrity) kwa ụbọchị, 100% na-akpaghị aka. Usersfọdụ ndị ọrụ ga-wepu aha ezie na, na-ahapụ gị ihe dị ka 70-80% nke ndị debanyere aha mgbe ọ bụla ebighị.
N'adịghị ka atụmatụ efu, atụmatụ ndị a akwụ ụgwọ bụ 100% akpaka, nke pụtara na ozugbo ị debanyere aha maka ya, ị gaghị alaghachi na SoNuker ọzọ. Anyị ga-enye gị ndị debanyere aha ọhụrụ kwa ụbọchị ka akaụntụ gị bawanye na nchekwa na otu ebe, na-enweghị isi!
Ọnụahịa ndị anyị na-akwụ maka atụmatụ ndị a pere mpe karịa ọtụtụ webụsaịtị ga-akwụ ụgwọ maka ndị debanyere aha "adịgboroja" nke a na-ewepụta otu oge kama ịdị na-apụta, nke na-eto kwa ụbọchị dị ka anyị napụta Priselọ ọrụ, ndị ọkachamara na ndị a ma ama na-eme ka ogo gị dị ka ihe okike ma na-efu obere ego nke ọnụahịa ahụ!
Emegoro m Enterprise, Elite ma ọ bụ Celebrity plan, mana ndenye aha m anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ n’ịzụrụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ, Elite ma ọ bụ Celebrity nke ọma, mana ndenye aha gị anaghị arụ ọrụ, biko kpọtụrụ anyị wee zitere anyị nseta ihuenyo nke azụmahịa ma ọ bụ nnata peeji yana URL gị, nke ga-enye anyị ozi niile anyị chọrọ enyere gi aka.
Emegoro m Enterprise, Elite ma ọ bụ Celebrity atụmatụ na-erughị 24 awa gara aga ma anatabeghị ndị ọ bụla debanyere aha.
Mgbe ịzụrụ Enterprise, Elite or Celebrity plan, ọwa gị na-abanye na netwọk n'ime awa ole na ole wee nọgide n'ime ya maka awa 24, nke bụ mmalite nke ụbọchị mbụ gị. N'ime oge elekere 24 ahụ, ị ​​ga-enweta oke nke ndị debanyere aha gị ụbọchị ma emesịa megharịa ọzọ n'echi ya. Buru n'uche, ndị debanyere aha anaghị abịa n'otu ntabi anya, mana a na-enyefe ha n'ime oge elekere 24, kwa ụbọchị.
Enwetara m nkwụghachi, mana ajụghị m ịrịghachi nkwụghachi m.
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-etinye ọtụtụ iwu maka otu ọrụ ahụ na-enweghị amataghị ya. Anyị na-enyocha aka mgbe nke a mere ma n'ọtụtụ oge, o doro anyị anya na onye ọrụ ahụ ebughị n'obi ime nke a. Anyị ga-echezọ ma kwụghachi ikike (nga) iwu (nga) ngafe, mana dobe 1 n'ọrụ ka ị nwee ike ịga n'ihu na-anata ọrụ anyị. Nkwụghachi ego na-ewekarị ụbọchị 10-15 azụmahịa ka ịlaghachi na akaụntụ gị.
Mgbe ịzụrụ ụlọ ọrụ Enterprise, Elite ma ọ bụ ndenye aha Celebrity, a ga-akwụ gị ụgwọ na otu ụbọchị kwa ọnwa. Ọ bụrụ n ’oge ụfọdụ ị chọghịzi ndenye aha gị SoNuker, zitere anyị ozi site na ibe Kpọtụrụ Anyị ma anyị ga-edozi akaụntụ gị ka ọ gwụchaa na ndenye aha ọnwa gị ugbu a.
You nwere ike ugbu a ịzụta gị Enterprise, J.Randall ma ọ bụ Celebrity atụmatụ iji onyinye kaadị!
2. Nbanye na akaụntụ SoNuker gị ma họrọ ma "Enterprise", "Elite" ma ọ bụ "Celebrity" na-ezube iji nweta nkwalite.